fusarshinlay - ဖူးစာရှင်လေး
It's official: New Ning pricing plans launch on July 20th. Learn more about how to cover your costs and generate revenue on Ning.
ဘာသာရေးကဏ္ဍ (အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်) (ဖားအောက်တောရဆရာတော်) (ဆရာဦးမြင့်လွင်-သန့်တည်ပွား)
( ဓမ္မ MP3 ဒေါင်းလုပ် )
(တပိုင်တနိုင် သာသနာပြုရအာင်)
ဓမ္မရံသီ (Knowledge Bank)
Burma Born (ဓမ္မဒါန)
မြန်မာအနုပညာရှင်များ၏siteများ www.alexlazyclub.com www.luminn.com www.lwinmeoe.com www.nawaratt.com
MMA Myanmar mp3
pansagar myanmar music
Forums Engineering www.engineeringforum.org
www.youtube.com video များအတွက်
(Carnegie Mellon Open Learning Initiative)
www.speedybit.com (Download accelerator plus)
www.wikipedia.org ( en.wikipedia.org )
www.bitdefender.com (Bit Defender)
Spyware,Adware,Trojan EJ,Worms ကာကွယ်ရန်
www.webroot.com (Spy Sweeper)
http://free.grisoft.com (AVG Anti-Spyware)
www.lavasoftusa.com (AD-Aware SE)
မြန်မာ sites များ
မြန်မာသီချင်းတွေနားထောင်လို့ရတယ် ကူးလို့ရတဲ့ sites တွေပါ
Premier Eleven ဂျာနယ်
ecovision bussiness journal
အခြားအသုံးဝင်သော site များ
www.globalhouseplans.com (House Design)
www.oryza.com (Rice Stock)
www.opec.org (Oil Stock)
www.xe.com (Money Exchange)
www.modelsurf.com (Korea Model)
www.jkdramas.com (Korea & Japan Model)
www.worldtimeserver.com (Time Convert)
Y8.com Flash Games
friv.com Flash Games
Daily Arcade Flash Games
ပန်းကလေးသို့... တခြားပန်းတွေ ဘယ်လောက်မွေးပြီး လှနေပါစေ
Added by ပိုင်ဇေ
ပိုင်ဇေ မွေးနေ့ အမှတ်တရ
Added by လရောင်ကို
Added by soe myint naing
aye moth moth lwin
sai htun kyaw
tha zin moe
ရေးသားတင်ပြသူwai phyo on July 17, 2010 at 3:57pm
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ Idea အချိ့
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 4:08pm
♥မျောက်တစ်အုပ်နဲ့ ဦးထုပ်သည် (ကောင်းသန့်)
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 3:52pm — 1 Comment
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:38pm
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:37pm
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:35pm
စိတ်ရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်သမား
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:33pm
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:14pm
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:08pm
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:07pm
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:01pm
ခလုတ်နှိပ်ရင်း ပိတ်မိနေရသည့် အကြောင်း
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 1:00pm
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 16, 2010 at 12:56pm
တ​ရုတ်​နိုင်ငံ​သား​များ​ ​ပန်း​သေ​ပန်း​ညှိုး​ ​ဝေ​ဒ​နာ​နှင့်​ ​ရင်​ဆိုင်​နေ​ရ
ရေးသားတင်ပြသူဖူးစာရှင်လေး on July 14, 2010 at 9:42pm
ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိ ၅ ရဲ့အဖြေ
ရေးသားတင်ပြသူkingzero on July 13, 2010 at 11:40pm
ရေးသားတင်ပြသူစိုင်းနေသွေး on July 13, 2010 at 9:06pm
ရေးသားတင်ပြသူစိုင်းနေသွေး on July 13, 2010 at 9:03pm
ရေးသားတင်ပြသူစိုင်းနေသွေး on July 13, 2010 at 8:57pm
ရေးသားတင်ပြသူစိုင်းနေသွေး on July 13, 2010 at 8:55pm
ချစ်သူကအပြစ်မရှိပဲ စွန့် ပစ်သွားရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ2Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in အချစ်အကြောင်း. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by sofia.80802hours ago.
တ​ရုတ်​နိုင်ငံ​တွင်​ ​မြေ​ပြို​မှု​များ​ဖြစ်​ပွား 1 Reply
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in သတင်းနဲ့ကြော်ငြာ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by Mi Thinzar Mon 8 hours ago.
ထူးဆန်းသည့် ကိုယ်ဝန် Ectopic Pregnancy4Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in ဗဟုသုတ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by soe san win 1 day ago.
သီချင်းဆိုတဲ့ မင်းသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in သတင်းနဲ့ကြော်ငြာ 1 day ago.
မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ကြုံတွေ့နေရသော အဓိကပြဿနာမှာ အေးဂျင့်များ၏ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းသိရ2Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in သတင်းနဲ့ကြော်ငြာ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by honey 1 day ago.
မင်းသမီး ပန်းဖြူ ရည်းစားဟောင်းကို တရားစွဲ9Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in သတင်းနဲ့ကြော်ငြာ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by joun young 1 day ago.
ဥာဏ်စမ်းမဟေဠိလေးနော် 15 Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in ဗဟုသုတ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by joun young 1 day ago.
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in ဗဟုသုတ 1 day ago.
ဥာဏ်စမ်းမဟေဠိ3Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in ဗဟုသုတ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by may 1 day ago.
သူ့ဆီက Email မမြင်ချင်ပါ4Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in နည်းပညာ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by waynweaye 1 day ago.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဓါတ်ပုံ( အမှတ်တရလေးပါ) 19 Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in အမျိုးအစားရွေးရန်. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by baby Jul 15.
2010 အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် စနေဂြိုဟ်စစ်ထိုးမှု သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ရန်ရှိ
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in သတင်းနဲ့ကြော်ငြာ Jul 14.
ဘာချေးတာကို မကြိုက်ဆုံးလဲ? 1 Reply
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in ဗဟုသုတ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by ဖိုးသားလေး Jul 13.
မလေးတွင် မြန်မာပြန်ပေးဆွဲဂိုဏ်းအား ဖမ်းဆီးမိ4Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in ဗဟုသုတ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by win htut Jul 12.
မျိုးကျော့မြိုင် ဇနီးဖြစ်သူ နှင့် လမ်းခွဲ 8 Replies
ရေးသားတင်ပြသူ ဖူးစာရှင်လေး in သတင်းနဲ့ကြော်ငြာ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ရေးသူ by mg myo maung maung Jul 11.
Alerts ( new)
သူငယ်ချင်းတွေ – ဖိတ်ခေါ်မယ် (1 request) (8 requests)
Quick Add… Blog PostDiscussionMusicPhotosVideo သူငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်မယ် Share This Page
ဖူးစာရှင်လေး created this Ning Network.
Fusarshinlay' site is
အိုင်တီဘလော့များ နည်းပညာအကူညီကိုညီနေမင်း IT Reshare Blog saturngod ကိုစိုးမင်း IT-MYANMAR အိုင်တီမန်း IT Resoure ThanLonge သံလုံငယ် ®
___ဗေဒင်ကဏ္ဍ_ ဂဏန်းဗေဒင် ရာသီခွင်နှင့်သိပ္ပံအမြင် တားရော့ဗေဒင် animal ဗေဒင် စံဇာဏီဘို အချစ်ဗေဒင် မြန်မာ့ရိုးရာနက္ခတ်ဗေဒင် ဗေဒင်သုခုမ စာအုပ်ဆိုဒ်များ နည်းပညာစာကြည့်တိုက် ကိုရန်နိုင်ဦး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် မြန်မာ ၀တ္ထူစာအုပ်များ တရားတော်များ စာအုပ်များ မြန်မာ E-Library E-books များ
မြန်မာဘလော့ဂ်များ ကဗျာသီတဲ့ကြိုး ကလိုစေးထူး ကိုကိုဖရီး ကိုရင်ညိန်း ကိုရင်နော်၊ ခင်လေးငယ် ကေ ကေဂျွန် ကေ.တီ.အမ် ကေမောင်ငြိမ်း ကေသွယ် (အန်တီ) ကျော်ကျော် ကျော်စွာ ကျော်ဇေယျ ကျော်မင်းထွန်း ကျော်လင်းထွန်း ကျော်လှိုင်ဦး ကျော်ဝင်းမိုး ကျော်သူလင်း ကောင်မလေး ကောင်းကင်ကို ကောင်းခန့် (ရသ) ကောင်းမွန်သောမနက်ဖြန် ကြည်မေကောင်း ကြယ်စင်ကျော် ကြယ်စင်နတ်သမီး ချိုငယ်ဦး ချောအိမာန် ခင်မျိုးဝင်း ခင်မင်းဇော် (အန်တီ) ခိုင်ဇော် ခိုင်ဘိုဘို ချင်းမလေး ချစ်ခြင်းခြေရာ ချစ်စမ်း ချစ်ညီမ ချစ်သဲ ချစ်ဦး ချစ်အိမ်ငယ် ခွပ်ဒေါင်းနီ ချမ်းမြေ့ဦး ခွန်မြလှိုင် ခွန်မောင် ခပ်ရင့်ရင့် အတွေးသံစဉ်များ ခွပ်ဒေါင်းဘုံယံသာ ခွပ်ဒေါင်းမာန် ချယ်ရီပန်း ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ချစ်သူများ ဂျိုကာ ဂျိုးဖြူ ဂျေ ဂျက် (မောင်) ဂျင်းဂျက်ကတ်လေး ဂျစ်တူး ငစနေ ငွေနှင်းမြူ ငွေလမင်း ငှက်ငယ်လေး ငြိမ်းချမ်းအောင် ငြိမ်းငြိမ်း ငြိမ်းစု ငြိမ်းဇေဦး ငြိမ်းဝေ ငြိမ်းအေးထွန်း ငယ်ငယ် ငယ်ဆူးအိမ် စကားဝါမြေ စီးဆင်းဆဲပါ ... ဧရာဝတီ စိုးဇေယျထွန်း စိုးထက် စိုးမိုး
MCရဲရင့် GiveaGift
sie thu GiveaGift
ye lin naing GiveaGift
myatthine GiveaGift
jj, nanzinzingsat, ning myint moe thu and7more joined fusarshinlay
sofia.8080 replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'ချစ်သူကအပြစ်မရှိပဲ စွန့် ပစ်သွားရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ'
wai phyo addedablog post
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သြ၀ါဒကထာများ ၁။ သစ္စာလေးပါးဆိုတာ သမုဒယသစ္စာ၊ ဒုက္ခသစ္စာ၊ မဂ္ဂသစ္စာ၊ နိရောဓသစ္စာ။၂။ ရခဲတဲ့ ဘ၀လေးမှာ အလကား အချိန်တွေ မဖြုန်းပါနဲ့။၃။ နားကတရားနာပါ၊ ဥာဏ်က ခန္ဓာလှည့်ပါ။၄။ တရားနာတာသည် မိမိအရေး၊ တရားအားထုတ်တာသည် မိမိအရေး။၅။ နားကြီးကြ…
Mi Thinzar Mon replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'တ​ရုတ်​နိုင်ငံ​တွင်​ ​မြေ​ပြို​မှု​များ​ဖြစ်​ပွား'
thar thar gaveagift to honeysoe
soe san win replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'ထူးဆန်းသည့် ကိုယ်ဝန် Ectopic Pregnancy'
chularlwin joined ဖူးစာရှင်လေး's group
သူငယ်ချင်းတို့ရေ.... ဒီနေရမှာကိုယ့်ချစ်သူဆီကိုရည်ညွန်းပြီးစာ တွေရေးလို့ရတယ်နော်
khanttunzaw commented on ဖူးစာရှင်လေး's blog post '♥မျောက်တစ်အုပ်နဲ့ ဦးထုပ်သည် (ကောင်းသန့်)'
သိပ်ကောင်းတဲ့ပုံပြင်လေးပါပဲ ယူတတ်၇င်တော့၇စ၇ာတွေကြီးပါပဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
ဖူးစာရှင်လေး added 16 blog posts
minnnoyar, tharzaw and မိုးမိုးအောင် joined fusarshinlay
ဖူးစာရှင်လေး added2discussions
honey replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ကြုံတွေ့နေရသော အဓိကပြဿနာမှာ အေးဂျင့်များ၏ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းသိရ'
hote pa agencey twe lone wa ma kg buu.......................
Mi Thinzar Mon replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'ထူးဆန်းသည့် ကိုယ်ဝန် Ectopic Pregnancy'
joun young replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'မင်းသမီး ပန်းဖြူ ရည်းစားဟောင်းကို တရားစွဲ'
moezatphyu leftacomment for ကိုထွေး
joun young replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'ဥာဏ်စမ်းမဟေဠိလေးနော်'
yin yin replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'မင်းသမီး ပန်းဖြူ ရည်းစားဟောင်းကို တရားစွဲ'
ဖူးစာရှင်လေး replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'ဥာဏ်စမ်းမဟေဠိလေးနော်'
may replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'ဥာဏ်စမ်းမဟေဠိ'
if i were thief I don't want to stole this mango because only2left(how can i do only2mango)
may replied to ဖူးစာရှင်လေး's discussion 'ဥာဏ်စမ်းမဟေဠိလေးနော်'
© 2010 Created by ဖူးစာရှင်လေး on Ning. CreateaNing Network!